Ukuthengisa umatrasi - Rayson
Ukho kwindawo efanelekileyo Ukuthengisa umatrasi.Okwangoku sele uyazi ukuba, nantoni na oyikhangelayo, uqinisekile ukuyifumana Rayson.siqinisekisa ukuba ilapha Rayson.
Le mveliso ayinamanzi. Kuza nokutyabeka okungangeni manzi kunye nokuvala amanzi okugcina ukufuma kungangeni..
Sijonge ukubonelela ngomgangatho ophezulu Ukuthengisa umatrasi.kubathengi bethu bexesha elide kwaye siya kusebenzisana ngokubonakalayo nabathengi bethu ukubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo kunye neendleko zeendleko.
I-Rayson kwi-Rayson Zone Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Ezona mveliso ziBalaseleyo zoMthengi wamaxabiso ohlobo lwentwasahlobo uMthengisi. ubungakanani obugcweleyo ngentlawulelo yeXabiso leMveliso Imveliso ineempawu zokuchachamba. Iyakwazi ukujamelana nokuqhekezwa kunye nokudlanga ngamandla kwaye ayonakaliswa kwiimeko ezibucayi. Imveliso epheleleyo icwangcisiweyo yenziwa ngaphambi kokuba imveliso iqinisekise ukuba iRayson iveliswa ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo. ubungakanani obugcwele beNtwasahlobo iMatric ixabiso Ukuthandwa kunye nodumo loMvelisi weRayson Spring Mattress kwimarike uyakhula.